bhimphoto: कोलाबेरी डी
केही अघि एक दिन हिन्दी भाषाको एउटा साइटमा समाचार थियो 'अमिताभ बच्चनले धनुषलाई रुचाए ।' खबरको शिर्षकले जिज्ञासा बढाएन । धनुष भन्ने कोही होला, जसको कामलाई बलिवुडका महानायकले मन पराएका होलान् भन्ने लाग्यो । त्यसलाई खोलेर हेरिएन ।
गत शनिवार कान्तिपुरमा आशिष लुइटेलले 'कोलाबेरी कोलाज' भनेर लेखेपछि त्यो गीत हेर्न मन लाग्यो । गत आइतवार उनै धनुषको नाम गुगलमा सर्च गर्दा युटयुबमा उनको गीतको लिंक देखायो । गीत रहेछ -'ह्वाइ दिस कोलाबेरी डी ।' लिंक फलो गरेर गीत सुनियो । गत नोभेम्बर १६ मा अपलोड गरिएको गीतलाई बुधवारसम्ममा २ करोड २६ लाख ४३ हजार २ सय पटक हेरिसकिएको रेकर्ड युट्युबमा देखियो । यो संख्या लगातार बढिरहेको छ । अंग्रेजीलाई निकै असजिलो पाराले उच्चारण गरिएको गीतले नर्सरी कक्षाका नानीहरुले जस्तो भाषा बोल्दो रहेछ । किन यो हिंस्रक आवेग, केटीले धोका दिए, जीवन अध्यारो, चन्द्रमाको रंग सेतो, त्यो रहने पृष्ठभूमी अध्यारो, मेरो प्रेम, स्कच भरिएको गिलासमा आँसू आदि आदि । गीतको भाषा कतैबाट पनि बान्की मिलेको भन्न मिल्दैन । म्युजिक भिडियोमा दृश्य देखिन्छ- रेकर्डिङ स्टुडियोमा इयरफोन लगाएका धनुष संकेत गर्दै मजा लिइ लिइ गीत गाउछन् । दुइटी युवती र एक युवक रेकर्डिङको कन्ट्रोल प्यानलमा बसेका छन् । बसेमध्येका युवक हुन् गीतका कम्पोजर १८ वषीय अनिरुद्र रविचन्दर । उनी बेला-बेला कीबोर्ड पनि बजाउँछन् ।
अनौठो लबजको गीतमा झुम्ने तरिका फरक छ । गीतमा बेलाबेला बिहेमा बजाइने सनइ प्रकारको बाजाको धुन घुम्छ । मिश्रति संगीत छ । गीत पनि टुटेफुटेका अंग्रेजी समात्दै गाएजस्तो । अझ सर्च गरेपछि थाहा भयो, यो गीतकै बारेमा वीकीपेडियामा छुट्टै पेज नै रहेछ । तमिल र अंग्रेजी मिश्रति भएकाले तंगलिस भनिएको । गाउने धनुष दक्षिण भारतीय चलचित्रका पार्श्वगायक र अभिनेता रजनीकान्तकी छोरी ऐश्वर्य रजनीकान्तका श्रीमान । २८ वर्षका धनुषले दक्षिण भारतीय चलचित्रका लागि गीतकार र गायकको काममात्र गरेका छैनन् , अभिनय पनि गर्दै आएको उनको पेजमा उल्लेख छ । र, उनले राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कारहरु पनि हात पारेका रहेछन् । तमिल भाषाका चलचित्र दक्षिण भारतमै चल्छन् । नेपालमा हामीसम्म आइपुग्दैन । त्यहाको भाषा पनि हामीले बुझ्न सकिने खालको छैन । तर, संगीतको सीमाना छैन । धुन मन परेपनि जो कोही सुन्न रुचाउछ । धनुष दक्षिण भारतीय चलचित्रका लागि सुपरिचित नाम रहेछन् । तर, उनलाई त्यो घेरा बाहिर ल्याउने काम उनको सुप र फ्लप सङ भनिएको संवादयुक्त कोलाबेरीले गरेको छ । धनुषको गीतलाई सोनु निगमले चार वर्षे छोरा निभानलाई गाउन लगाएछन् । त्यो भिडियो पनि कोलाबेरी सर्च गर्दा भेटिन्छ । तर, चार वर्षको फुचेले गाएका शब्दमा धनुषका भन्दा केही फेरबदल छ । उ व्हिस्की भन्दैन, दूध भन्छ । जे होस, भिडियो हेर्दा थाहा हुन्छ, बालसुलभ मुद्रा र भावमा कोलाबेरीको लय उसले पनि समातेको छ । यही गीत महिला स्वरमा पनि छ ।
वीकीपेडियामा छ, ऐश्वर्य रजनीकान्तले निर्देशन गर्दै रहेकी 'थ्री' नामक चलचित्रका लागि भनेर तयार पारिएको कोलाबेरी उनीहरुको अपेक्षाभन्दा बढि चर्चित भएको हो । यो दक्षिण भारतीय चलचित्र सन् २०१२ का कुनै महिना रिलिज हुनेछ । कोलाबेरीले धनुषलाई बलिवुडमा पनि राम्रो पहिचान बनाउन मद्दत गरेको छ । अब उनको स्वर अरु गीतमा सुनिए भने अनौठो हुने छैन ।
म सम्झन्छु, बेलाबखत नेपाली गीतमा पनि अनौठा लाग्ने प्रयोगहरु भएका छन् । हामी लय, सुर र गीतमा भाषाको व्याकरण नै बिगारेर बनाइएका गीतले चर्चा पाएका हुन् । पाएका छन् । धेरैले आलोचना गर्न रुचाउने प्रयोग भएका छन् । तर, हाम्रा प्रयोग किन धेरै लामो र फराकिलो क्षेत्र ओगटदैन । छक्क पर्छु । प्रकाश ओझाको ए बाउ भात खान आउ, श्रीकृष्ण लुइटेलको 'ए बा किन्देउन भटभटे', रुञ्चे गायक प्रकाश पौडेलको 'नाइ मलाइ त्यही केटी चाहिन्छ' आदि आदि । जस्ता गीतहरु सम्झना हुन्छ । गीत केही न केही अर्थ बोक्छ । चर्चा पाउछ । अनि हराउँछ । एकपटक अनौठा गायनले चर्चा पाएकाहरुका निरन्तरता फेरि दर्शक-स्रोतालाई सम्झाइरहने पाराका हुन सकेका छैनन् । कलाकारले फरक प्रयोगको एउटा खुड्किलोको भरले अर्को बाटो बनाउन जरुरी हुन्छ । यसका लागि सूचनाप्रविधि भरपर्दो सहयोगी बन्न सक्छ । इन्टरनेटको संसार यति फराकिलो छ कि हामी त्यसको भरपुर उपयोग गर्न सक्छौ । किन हाम्रा नयाँ पुस्ताका काम गराइ त्यस्तो नभएको होला भन्ने लाग्छ । कलासँग जोडिएका कुरामा प्रयोगपरक हुन जरुरी छ । जसरी हामी धनुषको गीत इन्टरनेटबाट खोज्न सक्छौ त्यसरी हाम्रा कलाकारका खोज्ने दिन पनि आउनुपर्छ ।
धनुषको कोलाबेरी हेर्न/सुन्न मन लागे यो तलको लिंकमा क्लिक गरे हुन्छ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:18 PM
भिडियो गज्जब कै छ ! बेला बेलामा यस्ता कुराहरु निस्किनै रहन्छन् ! तपाईले लेख्नुभए जस्तै प्रकाश पौडेल को रुन्चे गित पनि यही कोटीमा पर्छ भन्दा फरक नपर्ला !
अर्थ जेसुकै होस्, गित रमाइलो छ !
I have been curious about this song because of its weirdness.
It would have been great if you had more links on your article (for lazy people like me) :P ... eg: wikipedia page, the other songs that you mentioned etc.
In kolaberi D tone: where search garna jane, link ma clickne ni!